The best amafilimu opopayi emlandweni cinema izethameli zihlonzwe futhi abalandeli ngokuvumelana akuthandayo zabo. Isilinganiselwa iminyaka embalwa cishe akashintshi, ukuze ukwazi ukuqhubeka ngokuphepha yanjalo ukubuka opopayi langa. Banika izilaleli eziningi ezinhle, fun futhi ajabule ngoba ezinsukwini ezimbalwa ezizayo.
Kwaphela isikhathi eside mdwebo "The Lion King 'kubalwe esigabeni Kuhle Animated Film. Washiya ngo-1994 futhi ebonakala ngokuphindiwe phakathi nalesi sikhathi esikrinini. Noma kunjalo, ukuthandwa ngoba lokhu ke asikapheli. Uzungu ekutshela ngekusasa amadlingozi izilwane zasendle futhi imizamo King Lion avikele abangane bakhe kusuka izinsongo okulindile.
Ngaphambi izilaleli, avele umuntu we iseluleko uyaziqhenya, anomusa nanothando endlini yakhe. Simngungile, wahlanganisa izilwane eziningi zinhlobo ezahlukene ukuze kube umzukuzuku ngokuhlanganyela ngokumelene nombuso womuntu. Umdwebo "The Lion King" isibopho sokuba umkhaya ukubukwa abadala kanye nezingane.
Usezingeni amabhayisikobho engcono opopayi idume kweqiniso lokuthi, izenzakalo ezithakazelisayo kumnandi ukuthi ngeke kwenzeke empilweni yangempela. Izithombe noma asiyise mhlaba ngengqondo, noma vusa amathoyizi. Lena indaba ebonisa ababukeli cartoon "Monsters, Inc.".
Per umuntu afihlwe kusukela izindawo abahlala, ukuxhumana kanye ukusebenza izidalwa engavamile kakhulu. Umsebenti wabo oyinhloko njalo iyayithusa izingane, ngoba ukukhala kwabo ezisetshenziswa njengeziwusizo kwamandla for emzini izilo. Kusukela indawo yokuhlala, kunezinkulungwane iminyango okuholela kwekota womuntu, lapho bangakwazi ukwenza umsebenzi.
Uma izinhlamvu oyinhloko ifilimu "Monsters, Inc." langena umnyango, lapho babehlangana khona intombazane engavamile. Akesabi we izidalwa ezixakile, kodwa kunalokho wahleka izenzo zabo. Little bekulokhu ezikwazi ukuhlaba zingene umnyango imfihlo, lapho indlu kufihlwe izilo, futhi manje umsebenzi oyinhloko izinhlamvu ungayeki iziphathimandla ukuthola khona ingane. Amakhulu izimo ezithakazelisayo futhi funny balinde umbukeli lapho ebukela lesi sithombe. Ukuphakamisa kwemizwa Siyaqiniseka wonke umuntu.
Ubude obugcwele animated ifilimu "Ratatouille" akuyona kude ikhathuni ngenhla. It has efanayo izilinganiso okusezingeni eliphezulu, futhi ngempela endabeni futhi kunesijeziso izinhlamvu wasebenza ezingeni eliphezulu.
Igundane okuthiwa Remy bezilokhu zihlukaniswa kusukela congeners yayo ukunambitheka okukhethekile ukudla. Uyazi izilovela zakhe, futhi lokhu abafowabo edelelekile, ngoba ngokwesiko badla kuphela imfucuza. Nsuku zonke, Remy uzama ukuthola bona imvuthuluka ukudla ngokunethezeka yokudlela, lapho ayezama ukhiphe zonke izinhlobo izindlela. Lezi zingozi abayeki hero, ngoba ukholelwa ukuthi uma ube umpheki yangempela inhlangano yangasese. Anakho ithalente, kodwa ukuba bakholwe futhi ukuba waqaphela rat abantu bengayi.
Uma phakathi nabasebenzi yokudlela Remy wahlangana umsizi umpheki linguine, okuyinto uzalela imibono efanayo umlingisi lomcoka. Bobabili banquma ukuziqalela amabhizinisi abo bese uvula yokudlela ukupheka ukudla. Ikhathuni engena isigaba "Kuhle Animated Film" ngenxa imizwa emihle futhi indaba engavamile eziyokhanga ababukeli.
Isihloko umfana owakhulela phakathi gorilla zasendle ehlathini American, wavuswa ngo-1999, lapho kwakukhona opopayi "Tarzan." Uzungu isitshela indaba abalahlekile ngesikhathi kuphahlazeka indiza umntwana, abamzwise wathatha isizwe omkhulu lezimfene. Wayehlala ngaphansi kwemithetho yabo, wakhulela e-ukugijima njalo kanye nokunyakaza, futhi ngenxa yalokho wayethola amandla Amazing.
Kwaphela isikhathi eside, isilwane ezweni zasendle bengalamukeli umuntu, futhi kwadingeka ukuba njalo ukulwa kanye zizibonakalise yabo ekuphileni. Okunye indlela lapho akazi isikhathi eside, emva kwakho konke, ulimi lwabantu kakhulu babekhohliwe. Nge-gorilla guy ngokushukumisa umzimba nemisindo, njengoba wafundisa kusukela zisencane. Umhlangano wokuqala nomuntu abanjengami ngishaqekile kuye futhi baphendula imibono mayelana nezwe. Manje hero wema phambi isinqumo esinzima phakathi ulwazi oluthuthukayo lomhlaba kanye ukwethembeka emasikweni ehlathini. Ukuze umdlalo ezithakazelisayo indaba ikhathuni yayiyindawo esisemthethweni esigabeni "Kuhle Animated Film". Ngisho isheduli ubudala kulokhu akuvimbeli ukujabulela ezihambayo isinyathelo esikrinini.
5. "U-Arthur kanye Minimoys"
Ngo-2006 wakhipha umqulu opopayi "Arthur kanye Invisibles," okuyinto ngokomthetho esenzeka isigaba "Kuhle Animated Film".
Uzungu isitshela indaba umfana we eziyishumi Arthur, ubani ozama ukuthola ofihlwe nomkhulu ensimini. Ngaphandle-ke ngeke ukwazi ukukhokhela indlu abalimi abathileko, lonke izwe sithathiwe. Umkhulu umzukulu kwesokunxele uchungechunge kukuphi ukungena ezweni Amazing we Minimoys, lapho ayevame wavakashela ekuhambeni kwakhe.
Man nazo zonke isenzo futhi ngempela wangena izwe ezinye izidalwa owayemude encane ngezindlebe abukhali futhi ubuso bushelelezi. Kuphela lapha kuleli zwe, hhayi zonke enhle kangaka futhi kumnandi njengoba kwakubonakala ekuqaleni shazi iqhawe. umbusi Emibi obubi is elizonqoba zonke nemizana kanye lokubusa ngosizo ukucindezelwa nokwesaba. Arthur lizoqhubeka uhambo kanye iqembu labangane beqiniso ukulondoloza izwe futhi ukufuna amagugu. Lapha uzothola udumo, a lot of abangane nothando lwakhe kuphela kangaka ngokwesayensi eminyakeni engu ezincane.
6. art Japanese. "Hewulani sika Moving Castle"
Izwe YeJapan bekulokhu umbono wami ukuthi yini kufanele kube isithombe sopopayi.
Uhlu imisebenzi Japanese kulesi siqondiso iholwa nekhathuni emangalisayo omuhle ngokuthi "Hewulani sika Moving Castle." Uzungu kusekelwe indaba kwentombazane abavamile USophie. Wayehlala buthule emzini omkhulu ongakabi wahlangana uyathakatha embi siguqulwe umlingisi ku isalukazi. Ngaphansi inkontileka, Sophie kumele uthole ukuhamba inganekwane castle, futhi lapho kuphela-ke uzothola ukwelashwa. Phakathi nohambo lwakhe, yena ahlangabezane eziningi abasekeli kanye bayothola nabangane bangempela.
7. "enomfutho Away"
Ayikho ezingadumile kakhulu Japanese ifilimu animated ubhekwa isithombe "enomfutho Away." Ngaphambi isibukeli kuvula indaba ezingaqondakali i Heroine emangalisayo nesibindi Chihiro. Wayithola ku kwelinye izwe, lapho i uyathakatha okubi waphenduka umama nobaba izingulube. Ukuze uthole indlela yokuthola insindiso, kumele ucele isitha ukusebenza futhi ufunde kabanzi mayelana magic.
Kuhle amafilimu nge cartoon abalingiswa
"Iqiniso Simple": nabalingisi izinhlamvu yochungechunge engcono lesikole
Umlingisi Oleg Kharitonov: Biography, Filmography, empilweni yakho
Dzheymi Bell: Filmography, ukuphakama, isisindo nesithombe. Uhlu amabhayisikobho engcono ne umlingisi
Yini opopayi angaphandle kuwufanele ngokuvakashela?
Biography Griboyedov: isifinyezo. Amaqiniso ethakazelisayo nokuphila Alexander Sergeyevich Griboyedov
Eva Longoria: ukuphakama, isisindo, ukuma kwemigomo Hollywood inkanyezi
Happy Days Hotel 3 *, eKrethe, Agios Nikolaos, Greece - izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa
Indlela ukupheka ipea isobho? ongakhetha eziningana ukupheka
Izindleko zokukhiqiza futhi izinhlobo zawo
Ubuchwepheshe obusha bokuqapha ukuphepha kwekhadi lesikweletu
Izikhangibavakashi Volgograd esifundeni - isithombe kanye nencazelo
I-porcelain epholile ngaphandle kokupheka. Izindlela zokukhiqiza